Plasma Virus Cleaner (USB Type) – UniqueHMS
388/6A, Wireless 3rd Street, Kabar Aye, Mayangone, Yangon, Myanmar
(+95) 09 253 688 883 ~884
Plasma Virus Cleaner (USB Type)
Ye Kyaw Thein
Small Size: 79 x 35 x 15 mm
Easy to mount on automobiles, mobile, IT and computing devices
Get rid of viruses and odors in real time in your daily life.
Convenience of carrying and moving.
Equipped withaself-developed Dielectric Barrier Discharge (DBD) plasma generation engine.
It’s safe and optimized for the human body.
ဤ ထုတ်ကုန် ပလာစမာ ဗိုင်းရပ်စ်သန့်စင်စက် (USB) အမျိုးအစားသည် တစ်ကိုယ်ရေအသုံးပြုရန် နှင့် သေးငယ်သောအခန်းများ ၊ မော်တော်ယဥ်များအတွင်း တပ်ဆင်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ဤ ထုတ်ကုန် ပလာစမာ ဗိုင်းရပ်စ်သန့်စင်စက်သည် “တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ဆိုးလ်မြို့ရှိ ဂွမ်းအွန်းတက္ကသိုလ် ဇီဝ-ပလာစမာ ဓာတ်ခွဲခန်း”မှ သုတေသနပြု ထုတ်လုပ်ထားသော ကျန်းမာရေးအထောက်အကူ ပြုပစ္စည်း ဖြစ်သည်။
ဤထုတ်ကုန် ပလာစမာ ဗိုင်းရပ်စ်သန့်စင်စက်ကို လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို တပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
လေထု-ပလာစမာသည် အောက်ဆီဂျင်စနစ်၏ သေးငယ်သောမော်လီကျူးပြိုကွဲခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်ဓာတ်ကြွယ်ဝသော ပလာစမာ (Plasma) ပုံစံကြောင့် လေထုထဲရှိ ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ တုပ်ကွေပိုးးနှင့် ဘက်တီးရီးယားကဲ့သို့ သောရောဂါ ပိုးများကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။
အိုဇုန်းလွှာအဆင့် (Ozone Levels) များကို ထိန်းညှိပေးနိုင်သောကြောင့် ကမ်းခြေများ၊ သစ်တော များနှင့် နှင်းတောများကဲ့သို့ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ် အသက်ရှည်စေသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။
နိုက်ထရိုဂျင်အခြေခံပလာစမာဖြစ်သောကြောင့် အရေပြားဆဲလ်များကို ပြန်လည်ရှင်သန်ရန် လွယ်ကူစေသောအစွမ်းရှိသဖြင့် အရေပြားကျန်းမာရေးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။ အရေပြားအလှအပနှင့် အရေပြားဆဲလ်များ ပြန်လည်မွေးဖွားမှုကို ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်ပါသည်။
ပလာစမာ ဗိုင်းရပ်စ်သန့်စင်စက်သည် ဆေးလိပ်မီးခိုးနံ့၊ အပုပ်နံ့ အစရှိသော အနံ့ဆိုးတွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး သန့်ရှင်းတဲ့လေကိုထိန်းသိမ်းရာမှာထိရောက်မှုရှိပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်လေထုထဲရှိ အနံ့ဆိုးများကို ပျောက်ကင်းစေသောအာနိသင်ရှိပါသည်။
ပလာစမာ ဗိုင်းရပ်စ်သန့်စင်စက်သည် အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံနှုန်းများကိုလိုက်နာပြီး အကောင်းဆုံးလူနေမှုဘ၀ အတွက် စံပြပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါသည်။
ပလာစမာ ဗိုင်းရပ်စ်သန့်စင်စက်၏ အိုဇုန်းလွှာထုတ်လွှတ်မှုသည် လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၏ လုံခြုံမှုစံနှုန်းများနှင့် အညီဖြစ်ပြီး အမြင့်ဆုံး အိုဇုန်းထုတ်လွှတ်မှု (၀.၀၂၂) ppm သာ ထုတ်လွှတ်မှုရှိပါသည်။
EasyFO Training @ Grand ACE Hotel
EasyFO Training @ Amata Resort
EASYFO Discussion @ Taungoo Kaytumadi Hotel
PrevPreviousPlasma Virus Cleaner (Necklace Type) – 2022 New Year Product
NextPlasma Virus Cleaner (Socket Type)Next
we will assist you 24 /7/ 4
No. 388, Room-6A, 6th Floor, Wireless, 3rd Street, Ward No 9. Infront of Gems Museum, Kabar Aye, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.
info@uniquehms.com , sales@uniquehms.com, support@uniquehms.com;
2521/32 Baanklangkrung Biz Town, Ladphrao Road, Klongjaokhunsingh, Wangthonglang, Bangkok 10310 Thailand
+662530 3131
5/60 Sakdidaj Rd., T. Taladnue, Muang, Phuket 83000 Thailand
+66 76 22 5779
Bossotel Hotel 10/4 Rodphai Rd., Muang, Chiangmai 50000 Thailand
+66 53 24 8849
© 2022 Unique HMS Co., Ltd, all rights reserved. Friendly powered by Assembler.